Naluphina uhlobo olutshitshweyo lwegama okanye ibinzana isicatshulwa. Iimpawu eziqhelekileyo zihlobo lwesigqabiso esingachazwa njengegama elinye.
Izibhenkco zisetyenziselwa ukhetho kwincoko kunye nesiNgesi esibhaliweyo. Ngokuqhelekileyo, izifinyezo eziqhelekileyo ezinjengeemilinganiselo kunye nezihloko zihlala zifomfwe kwifom ebhaliweyo. Nangona kunjalo, iintsuku kunye neenyanga zibhalwa ngokubanzi. I-intanethi, izifinyezo kunye neenkcukacha eziqhelekileyo ziqhelekileyo ekuthumeleni iifowuni, kumagumbi okuxoxa kunye neSMS.
KwiNgesi ethethiweyo, sisoloko sisebenzisa izifinyezo kwiingxoxo ezingaqhelekanga . Umthetho omhle wesithupha unokusebenzisa izifinyezo kunye nezigama owaziyo ukuba abanye bayazazi, kwaye baphephe xa bebodwa.
Umzekelo, ukuba uncoko kunye nomlingane wezoshishino kungakufanelekile ukusebenzisa izibhenqo ezithile kumgca wakho womsebenzi. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwezifinyezo ezinxulumene nomsebenzi kwakungekho ndawo xa uthetha nabahlobo. Nantsi isikhokelo kwezinye zezibheno eziqhelekileyo.
Enye yezona ziqhelo eziqhelekileyo zezibhenkcoli ligama elifutshane. Ngaba iileta ezimbalwa zokuqala zegama okanye iibhokisi ezibalulekileyo ngeli gama zisetyenzisiwe kulolu hlobo lwesicatshulwa. Izifinyezo eziqhelekileyo ziquka izihloko ezisetyenziselwa kwingxoxo yansuku zonke, kunye nemikhosi yempi:
Mnu - Mfundisi
Nkosikazi - Mfundisi
Nks. - Miss
UDkt - Ugqirha
Sr. - oPhezulu
Comdr. - uMlawuli
Col. - Kolonel
Jikelele - Jikelele
INhlonipho. - Ohloniphekileyo
Lt. - uLieutenant
Ezinye izifinyezo eziqhelekileyo ziquka:
Jan. - Januwari
NgoMatshi - uEpreli
Agasti - Agasti
Oktobha - Oktobha
NgoNovemba - Novemba
NgoDisemba - Disemba
Mon. - UMvulo
Uluhlu. - ULwesibini
Wed. - ULwesithathu
Ngelo. - ULwesine
Fri. - ULwesihlanu
Sat. - UMgqibelo
Ilanga. - ICawe
Ubukhulu kunye noMqulu
lb - iipounds
ukuhamba. - volume
hr - iyure
Ubude - US / UK
in. - intshi
m - imitha
Iibhenqo zokuqala zeencwadi zithatha ileta yokuqala yegama ngalinye elibalulekileyo kwinqanaba elifutshane ukwenza isicatshulwa. Iziphakamiso zivame ukushiywa ngaphandle kweengqungquthela zeencwadi zokuqala. Enye yezona zibhengezo zeencwadi eziqhelekileyo zi-USA - United States of America. Phawula indlela umboniso 'we' oshiywe ngayo kule ngcaciso.
Ezinye iziqulatho zezibhalo eziqhelekileyo ziquka:
W - eNtshona
SW - kumzantsi
I-BBC - I-British Broadcasting Corporation
IRS - iNkonzo yeNgeniso yangaphakathi
I-NASA - iNational Aeronautics kunye noLawulo lweZithuba
I-NATO - Intlangano yeNtshona Atlantic
I-UNICEF - i-United Nations Children's Fund
WHO-Inhlangano Yempilo Yehlabathi
MPH - iMiles ngeyure
RPM - Iimpendulo ngomzuzu
Btu - iiyunithi zaseBrithani ezishisayo
I-SMS, Ukuthumela imiyalezo, Ingxoxo
Izifinyezo ezininzi zisetyenziswe kwi-intanethi nakwimpilo yethu yansuku zonke ngee-smartphone, amagumbi okuxoxa, njl. Nantsi embalwa, kodwa landela iinqununu zoluhlu olupheleleyo kwi-alfabhethi.
B4N - Bye okwangoku
ASAP - Ngokukhawuleza kunokwenzeka
NP - Akukho ngxaki
I-TIC - Ulwimi kwisihlathi
Iimpawu zokuqala ziincwadana zokubhala ezichazwe njengegama elinye. Ukuthatha imizekelo evela ngasentla, i-BBC ayikho isicaciso ngoba ibhengezwa njengokuba iphepheni: i-B - B-C. Nangona kunjalo, i-NATO isigama-magama kuba ivakaliswe njengegama elinye. I-ASAP yenye enye impawu, kodwa i-ATM ayikho.
Iingcebiso zokusebenzisa izifinyezo kunye nama-acronyms
Sebenzisa izifinyezo xa uthumela imiyalezo ngokufunda iziqulatho eziqhelekileyo
Sebenzisa i-acronyms njengedivaysi yecomputer ukukunceda ufunde uluhlu olubanzi lwegama. Ngamanye amagama, thabatha uluhlu lwamagama ofuna ukuwafunda kwaye ukhumbule iileta zokuqala zegama ngalinye ofuna ukulifunda. Umzekelo: Iimbala eziPrayimari: RBY-- obomvu, obomvu, ophuzi.
Sebenzisa izifinyezo xa ubhala ii-imeyili ngokukhawuleza kwizwi elingacwangcisi.
Ungasebenzisi izifinyezo okanye xa ubhala i-imeyile esemthethweni, iingxelo okanye iileta ngaphandle kwegama elifanayo lombutho
Ngezinye izibhengezo ezingavamile, sebenzisa igama elipheleleyo lilandelwa isichazi kubazali babazali bokuqala xa usebenzisa isicacisi kwiinkcukacha ezibhaliweyo. Umzekelo: I-International Monetary Fund (IMF) inoxanduva lokukrazula imali kwiintlanga. Njengoko ihlabathi lijongene nobunzima obuninzi kwezoqoqosho, indima ye-IMF ihlala ibuzwa.
Isifundo samalanga onke esiMatarin: "Xa" ngesiTshayina
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi "Intlawulo" (ukuhlawula)
Isiphi Isithuba Esibi Sokubugcisa?
Isandla esinamandla: Abahlanu abakwaRussian Nationalist Composers